Bixinta Gaarka ah - Machadka Waxbarashada Labada Luuqadood
Soo bandhigid Khaas ah
Bogga ugu weyn Soo bandhigid Khaas ahSoo bandhigid Khaas ah
Isqorista Abriil 15, 2021, oo hel:
Lacag Codsi Bilaash ah
Imtixaanka Meelaynta Bilaashka ah
Fasallada Khadka Tooska ah ama On-Campus
Bixinta Gaarka ah ee Guga Qiimuhu wuxuu kaliya ansax yahay waxbarashada la bixiyo Abriil 15, 2021.
Bixinta laguma dari karo waxyaabo kale oo gaar ah ama qiimo dhimis.
Dalabku kuma ansaxsana qorshooyinka lacag bixinta.
Bixinta laguma dabaqi karo ama laguma hagaajin karo heshiisyada diiwaangelinta ee hore loo saxeexay.
U soo bandhig ardayda kaliya.
Right Xuquuqda daabacaadda Machadka Waxbarshada Labada Luqadood ee 2021